Otu esi etinye Skype na Fedora 34/35 - LinuxCapable
Otu esi etinye Skype na Fedora 34/35
October 31, 2021 October 10, 2021 by Jọshụa James
Usoro 1. Wụnye Skype site na RPM
Usoro 2. Wụnye Skype na Flatpack
Usoro 3. Wụnye Skype dị ka ngwugwu Snap
Kedu ka esi malite Skype
Skype bụ ngwa nzikọrịta ozi nkeonwe nke nwebere ma mepụta ya Microsoft. Skype bụ otu n'ime ngwanrọ ama ama na ama ama maka ngwa nzikọrịta vidiyo, ọdịyo na ederede dị n'ofe ọtụtụ nyiwe. Maka ọtụtụ akụkụ, free ibudata na iji, Skype bụ ngwá ọrụ magburu onwe ya maka iso ndị enyi na-akpakọrịta ma ọ bụ soro ndị ọrụ ibe na-arụkọ ọrụ.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Skype na Fedora.
OS akwadoro: Fedora Linux 34/35 (Ụdị ochie ga-arụkwa ọrụ)
Tupu ịga n'ihu na ntinye nke Skype, gbanye iwu a ka ịwụnye ma ọ bụ lelee na ngwugwu dnf-plugins-core arụnyere na desktọpụ Fedora gị.
Nzọụkwụ mbụ ịwụnye Skype na desktọpụ Fedora gị bụ imepe windo ọnụ gị wee gbakwunye ihe ndị a:
Ị ga-enweta nsonaazụ na-esote nke na-agwa gị ka etinyela ebe nchekwa ahụ nke ọma na sistemụ gị. Agbanyeghị, maka ndị chọrọ ịlele, gbasoo iwu a:
Ugbu a ị rụnyela ebe nchekwa RPM nke ọma, ọ bụ oge iji mee iwu nrụnye:
Mara, ngwa ngwa ga-apụta na-adụ gị ọdụ ka ibubata ihe ahụ igodo GPG nke a chọrọ iji mechaa nrụnye:
ụdị "Y," wee pịa "Tinye igodo" iji gaa n'ihu na ntinye na mmecha.
Ozugbo echichi mechara, ị ga-ahụ nsonaazụ njedebe ndị a:
Nhọrọ nke abụọ bụ ịwụnye Skype na Flatpack nke etinyere na sistemụ Fedora gị. Usoro a na-ewu ewu yana ndị ọrụ Fedora.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịme ka Flatpack maka Fedora jiri iwu na-esonụ na ọdụ gị:
Ọzọ, wụnye Skype site na iji Flatpack dị ka ndị a:
Flatpack na-edozi mmelite na-akpaghị aka oge ọ bụla ịbanye na sistemụ gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ iwepu ụdị Flatpack nke Skype, mee iwu a:
ụdị "Y," wee pịa “ENTER Key” iji wepu Skype site na iji Flatpack.
Enwere ike itinye Skype site na njirimara ngwugwu snap nke enwere ike itinye na Fedora. Nke a adịghị ewu ewu dị ka ụzọ ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, maka ndị ọrụ na-eji Snaps ma ọ bụ nwere mmasị iji ha na Fedora, ị nwere ike iji ihe ndị a iji wụnye Skype na desktọpụ gị.
Mbụ, wụnye snapd na sistemụ arụmọrụ Fedora gị:
Ozugbo etinyere Snap, a na-atụ aro ka ị pụọ wee laghachi ọzọ ma ọ bụ malitegharịa sistemụ gị iji hụ na emelitere ụzọ snap nke ọma.
Mgbe ịpụchara ma ọ bụ malitegharịa sistemụ gị, ọ bụrụ na ị wụnye Snap na nke mbụ, a na-adụ ọdụ ka ịwụnye faịlụ ndị bụ isi iji zere nsogbu ndị na-emegiderịta onwe ha:
Na-esote, tinye iwu snap a ka ịwụnye onye ahịa Skype:
Maka ọdịnihu, iji melite Skype na ngwungwu ọ bụla Snap arụnyere, mee iwu a:
Ọ bụrụ na ịchọkwaghị itinye Skype, wepụ ya site na iji iwu wepụ Snap.
Na ọdụ gị, ị nwere ike imepe Skype site na iji iwu a:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ Skypeforlinux & iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Ndị ọrụ Flatpak ga-achọ ịgba ọsọ ọsọ ọsọ flatpak iji malite onye ahịa Skype site na ọdụ.
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na nke gị Fedora desktọpụ iji meghee ụzọ: Ihe omume> Gosi ngwa> Skype. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Mara, ị nwere ike ịdị mkpa iji skype kama skypeforlinux ọ bụrụ na ị wụnye njikwa ngwugwu dị ka Snap iji malite ngwa site na ọnụ.
The oge mbụ Ị mepee Skype, a ga-ekele gị site na ndị a:
Biko mepụta akaụntụ ọhụrụ, ma ọ bụ jiri akaụntụ gị dị ugbu a banye, nke ahụ bụkwa ya. Awụnyela Skype na desktọpụ gị nke ọma.
N'ime nkuzi a, ị mụtala otu esi etinye Skype na Fedora. N'ozuzu, Skype na-enye gị ohere ịme ma vidiyo na oku olu na kọntaktị nkeonwe na azụmahịa gị. Skype nwere ike ịbụ ngwá ọrụ bara uru n'etiti ọtụtụ ndị na-akparịta ụka n'etiti otu ma ka bụ taa na-eduga n'ọgba ahịa ahịa.
Categories Fedora Tags Fedora 34, Skype Mail igodo
Otu esi etinye Foxit PDF Reader na Fedora 34 & 35
Otu esi etinye asụsụ mmemme Rust na Fedora 34/35